Ukukhwehlela kabuhlungu - ke ostroinfektsionnaya isifo, iningi ngokuvamile - wadluliselwa amaconsi sisemoyeni. ukukhwehlela eqinile spasmodic sici esiyinhloko. Ukukhwehlela kabuhlungu kuthinta ipheshana zokuphefumula futhi isifo esiyingozi kakhulu. Usongo olukhulu okuzilethayo izingane ezineminyaka eyodwa iminyaka emibili. Stick Bordet-Zhang yilona ejenti causative lesi sifo.
Whooping izimpawu ukukhwehlela-efana izingane
Eyokuqala zezimpawu zokuthi pertussis ezinganeni obonakala njengenhlangano ubuthakathaka, imnyama, amakhala yisisu, imfiva okuncane nokukhwehlela okuncane. Ngo ukuthuthukiswa ukushuba ukukhwehlela ukugula iyakhula. A uphawu ezivamile ukukhwehlela whooping ezinganeni ukuthi ngemva ukhwehlela ephefumula umoya nzima, ngokuvamile kuhambisana umuzwa ubuhlungu. Lapho expectoration isikhwehlela labelwe okusobala. Ngezikhathi ezithile ukuhlanza kwenzeka. Pale, ibala ngezinye izikhathi bluish okhethwe zonke izilimi inkampani, emithanjeni yabo evuvukele entanyeni ngesikhathi ukukhwehlela - konke lokhu kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso isifo okuthiwa ukukhwehlela whooping. Izimpawu ezinganeni ngokuvamile zihlukile kancane, akukho skhety ecacile lapho isifo siqhubeka. izimpawu ezinjalo pertussis ezinganeni njengoba umongozima futhi ukhwehlela igazi, ukumiswa okwesikhashana ukuphefumula ezingajwayelekile, kodwa namanje. Singasho ukuthi uphawu oyinhloko ukukhwehlela whooping ezinganeni ukukhwehlela. Lokhu ukukhwehlela ihlala cishe amasonto amathathu, ngezinye izikhathi ukuhlaselwa aphindaphindwe kuze kube izikhathi 50 ngosuku.
Pertussis - amakhambi ukwelashwa abantu, zokuvimbela
Enye esibhedlela kwaba kanye uhlala ekwelapheni amakhambi abantu. Tincture amakhambi, izitshalo nemifino ziyisisekelo impatho enjalo. Musa ukuchitha isikhathi sakho, kodwa kungcono uqhubekele ukwelashwa esebenzayo lesi sifo ukukhwehlela whooping. Izimpawu ezinganeni izokutshela isikhathi esiqondile.
Nazi izindlela ezimbalwa ngempumelelo:
- Hlanganisa ugarliki ecubuziwe nezinyosi isilinganiso 1 kuya 1. Njalo ebusuku, ngaphambi kokulala, nibeke cindezela le ngxube esifubeni.
- Thela amanzi abilayo isipuni esisodwa Thyme, sokunika, zihambisana ithawula, cishe imizuzu engu-40-50, bese sokukhipha. umhluzi Ready uthathe amathisipuni amabili kathathu ngosuku.
- Marku rosehips, Yarrow, chamomile, coltsfoot, sembabazane, lwebhece impande ngezabelo alinganayo. Thela amanzi abilayo phezu ingxube utshani (i isipuni esisodwa utshani kumele usebenzise ingilazi yamanzi abilayo). Lolu ketshezi kanye amakhambi kufanele wafaka endaweni thermos amahora ayi-8. inkomishi Okwesithathu ukumnika onezinkinga ukuthatha kathathu ngosuku.
-Melko oqoshiwe 5 ugarliki. Bilisa ubisi ne garlic kuze izingcezu zokugcina sesingochwepheshe esithambile. okuholela Polstakana ketshezi kuthathwe kabili ngosuku.
- Hlanganisa ezomile wort iSt John sika, coriander, inadi cranberry, Mint, calendula, rose, zikagamthilini. Thela amanzi abilayo phezu ingxube amakhambi e isilinganiso nendebe amanzi abilayo eyodwa isipuni amakhambi. Thela thermos futhi bagcizelele zingakapheli izinsuku. Lolu ketshezi okuholela ukuphuza kathathu ngosuku inkomishi lwesithathu.
Kuzo zonke izinkethi ukwelashwa pertussis ekhaya zizosebenza ngaphezulu uma sihlanganisa nabo ukuphuza ngokweqile, lwesinaphi plasters, amabhange, ukusetshenziswa izithelo, imifino, izithelo. Ukusetshenziswa amakhambi abantu ukuze bathole ukwelashwa ngokuqinisekile ewusizo futhi ithele, kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi ukuhlolwa nokuhlola udokotela yengane, kuyingxenye ebalulekile yokwelapha kanye, ngenxa yalokho, yokutakula.
Ngemva ulwazi mayelana nazo zonke izingozi ezicashile isifo, nawu umbuzo: Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi pertussis? Izimpawu ezinganeni Izokwazisa ngenxa lapho umntwana wagula. Ngokuvamile, it is ayihambi ngokusebenzisa emoyeni, noma kunalokho, ungathola ogulayo, ukukhuluma isiguli, usebenzisa izinto ezifanayo noma amathawula. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni we pertussis ezinganeni (isikhathi lapho isifo ayinakuboniswa) ihlala kufika izinsuku ezingu-15. Pertussis - isifo esithathelanayo kakhulu okuyinto idluliselwa cishe ngokuphelele ukuxhumana nesineke. Ngokuvamile kuthinta eziphilayo zasenkulisa izingane, abantu abadala bayagula ingasaphathwa ngokuvamile. Nokho, ukudlulisela lolu isifo, umzimba iba amasosha omzimba enamandla, ngakho uthole ukukhwehlela whooping okwesibili cishe kungenakwenzeka. Nakekela impilo yakho futhi wenze zokuvimbela ngesikhathi esifanele, bese lesi sifo ngeke ukukuhlupha.